fahoriana | Avylavitra - Miray anaty fahasamihafàna, mizara hitondra hafanàna
AZA MAHAVOA NY GOAVY MANTA
Posted on mai 16, 2008 by avylavitra
Misy aminareo namako no mahalala fa nampiantrano tra-boina tamin’ireny rivo-doza Ivan ireny izahay. Nisy fotoana anefa nirodana ny ampahan-drindrina tamin’ireo trano roa nandraisana ireo tra-boina. Tsy maintsy nifanarahana tamin’ny tompon-trano nifanila izay niantefan’ny an’ny tena ny fanamboarana ny zavatr’olona, izay mbola eo an-dalam-pamitana ankehitriny.
Fa izao indray tamin’ny Zoma talohan’ny fetin’ny Pentekoty teo dia maty ilay ramatoabe tao amin’ilay fianakaviana kely faharoa. Olona sahirana ara-pivelomana moa ireto olona ireto satria rangahy mpanao asa an-tselika, ary ramatoa renin’ny ankizy kosa mpamafa lalana ao amin’ny fivondronana. Iarahan’ny rehetra mahalala tsara fa na ny Zones Franches aza ankehitriny dia mismisy ihany ireo manala mpiasa (Floreal ohatra).
Fa izay tena goavy manta amin’ny tantara dia ny nahazo anay mivady. Tonga nampandre ny fahafatesana taty an-tranonay ny zanaky ny maty ny Alarobia vao maraina be. Nilaza ry zareo fa ny Sabotsy amin’ny iray ora no miala ao an-tanàna ny razana. Koa satria moa ny tena tsy eto an-tanàna raha tsy efa alina ny andro, noho ny anton’ny asa, dia nanapa-kevitra ny hamangy rehefa Zoma hariva. Novidiana ny lambamena hatolotra ireto fianakaviana mahantra (miala tsiny sao misy mandray io teny io amin’ny fomba hafa fa tena izany mihitsy no toerana misy azy ts’inona). Roso ny dia niala an’Andravoahangy ho eny Ambohimanarina ,nony tonga avy any Ambohimanambola aho tamin’ny 5 ora sy sasany hariva. Tonga tany an-toerana nanodidina ny tamin’ny enina mahery kely teo. Ireo fianakaviana koa amin’io fotoana io tena mbola vory tanteraka tao an-tanàna, ary mipetraka ao an-tokantrano toy ireny mana-manjo rehetra mbola miandry mpamangy ireny.
Nisy nanontany ary izahay nony tonga teo am-bavahady (olona tsy nahalàla anay rahateo no niandry teo). Rehefa nilaza izahay fa hamangy ny mana-manjo (izahay rahateo tsy nitonona mihitsy hoe ny tompon-tanàna), dia nampandrosoina. Natao ny famangiana, toy ireny hoe mbola am-bohitra ireny ny razana. Natolotra ny vola sy ny lambamena.
Rehefa vita izay rehetra izay, ka nivoaka izahay mivady vao notsenain’ny zanakalahin’ny maty tany an-tokontany, sy nilazana fa vao tonga avy nandevina an-dreniny ireto fianakaviana.
Sanganehana tanteraka izahay ary tsy nahita izay havaly sy hatao intsony satria mbola saiky hiala tsiny noho ny tsy hahafahana mandevina ny Sabotsy (samy mbola hamita asa mantsy amin’io andro io)no sady tsy afaka tonga aloha ihany koa namangy sy nitondra izay mba fanampiana azo natao, na dia isan’ireo olona nilazana voalohany aza.
Namaly anefa ilay zanany fa tsy misy ny tsiny satria izy ireo no tsy afaka nampilaza ara-potoana intsony noho ny dokotera no nanery azy ireo handevina haingana ny razana fa tsy azo tazonina ela intsony (Narary fo mantsy ilay ramatoabe ka efa ela tokoa no nivonto be ny tenany, tsy nahita ny masony ary nanjary tsy nahare intsony koa ny sofiny, ary dia nentiny mandra-maty ireo rehetra ireo).
Na izany aza, « Aza mahavoa ny goavy manta » toy izany ry zareo fa tena …….
Filed under: Andavanandrom-piainana | Tagged: fahoriana, fifandisoam-potoana, goavy manta |	Leave a comment »